Ny iMac Pro 27-inch dia afaka manomboka amin'ny lohataona manaraka | Avy amin'ny mac aho
Ny iMac Pro 27-inch dia mety hanomboka amin'ny lohataona manaraka
El 27-inch iMac miaraka amin'ny Mac Pro ireo Mac roa sisa "velona" ao amin'ny Apple Store izay mametraka ireo processeur Intel. Ary raha tsy izany, dia voaisa ny androny. Ary ny fianjerana manaraka dia ny iMac.
Araka ny tsaho farany, Apple dia mikasa ny hamoaka ny vaovao 27-mirefy iMac Pro, mazava ho azy fa misy processeur M1 azo isafidianana, izay hampisotro ronono ny iMac amin'izao fotoana izao mitovy habe, fa miaraka amin'ny teknolojia Intel. Noho izany dia "saika" ny faribolan'ny Apple Silicon dia hikatona, ka hamela ny Mac Pro ho bastion farany an'ny Intel ao Apple.
Vaovao tatitra de Mpanolo-tsaina Chain Supply Izy io dia manazava amin'ny volo sy famantarana izay ho Mac manaraka hiseho eny an-tsena. Ary araka ny filazan'izy ireo dia ho iMac Pro 27-inch izay ho hitantsika ao amin'ny Apple Store amin'ny lohataona manaraka.
Ity tatitra ity dia milaza fa Apple dia handefa iMac Pro 27-inch miaraka amin'ny fisehoana miniLED ary ny teknolojia ProMotion mandritra ny lohataona 2022, miaraka amin'ny fandefasana (farany) ny endri-javatra Universal Control an'ny macOS Monterey.
Raha, amin'ny farany, hoy ny modely iMac Pro dia manana efijery miniLED, io no fitaovana fahatelo amin'ny orinasa hampiasa an'io karazana tontonana io, aorian'ilay vaovao. iPad Pro M1 sy ny vaovao MacBook Pro M1 Pro sy M1 Max.
Ao amin'io lahatsoratra io ihany, dia natao ihany koa ny fanondroana ny famokarana ambany andrasana amin'ny solomaso AR an'ny Apple, ary ireo fitaovana miforitra manaraka an'ny orinasa, mbola tetikasa maitso maitso izay tsy hiseho raha tsy amin'ny 2024.
Ny tena mazava dia afaka volana vitsivitsy dia hanana iMac 27-inch vaovao isika (ho hitantsika raha Pro na tsia) miaraka amin'ny puce M1 hanoloana ny ankehitriny. Tena lasa lany andro raha oharina amin'ny Mac rehetra Silicon Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Ny iMac Pro 27-inch dia mety hanomboka amin'ny lohataona manaraka
Ny fiasa Universal Control dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny lohataona 2022
Ny vaovao rehetra ao amin'ny macOS Monterey 12.1, macOS Catalina ary macOS Big Sur 11.6.2